पाँच प्रदेशका ३६ सांसद नयाँ पार्टीमा, कुन प्रदेशमा कति ? « Rara Pati
पाँच प्रदेशका ३६ सांसद नयाँ पार्टीमा, कुन प्रदेशमा कति ?
१७ भदौ, काठमाडौं । पाँच प्रदेशका ३६ जना सांसदले नेकपा (एमाले) विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन् । अझै दुई वटा प्रदेशमा रोज्न बाँकी छ ।
बिहीबारसम्म गण्डकी र प्रदेश २ बाहेक पाँच वटा प्रदेशका ३६ जना एमाले सांसदले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२ सांसदले एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् ।
बागमती प्रदेश सभामा एमालेका ५६ जना सांसद निर्वाचित थिए । कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट दोलखाका सांसद पशुपति चौलागाईंको निधन भएको थियो । बाँकी ५५ जनामध्ये १२ जना नयाँ पार्टीमा लागेका हुन् ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका २४ सांसद निर्वाचित थिए । तीमध्ये १० जनाले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् । अझै केही सांसद नयाँ पार्टीमा आउने एकीकृत समाजवादीकी नेत्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।
प्रदेश १ का पनि १० सांसदले नयाँ पार्टी रोजेका छन् । नयाँ पार्टीमा सनाखत गर्ने सांसदमा राजेन्द्र राई, राजन राई, गणेश काम्बाङ्ग, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापा रहेका छन् ।
अझै पाँचदेखि सात जनासँग सल्लाह भइरहेको सांसद राजेन्द्र राईले बताए । योसँगै प्रदेश १ मा भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये १० जनाले नयाँ पार्टी रोजेपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका तीन जना सांसद नयाँ पार्टीमा गएका छन् । सांसद देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही र पदमबहादुर रोकायाले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका २० सांसद निर्वाचित थिए । तीमध्ये माधवकुमार नेपाल पक्षका चार जना सांसदलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका थिए । बाँकी १६ जनामध्ये पनि तीन जनाले नयाँ पार्टी रोजेका हुन् ।
लुम्बिनीमा भने एमालेका एक सांसदले मात्रै नयाँ पार्टी रोजेका छन् । उपसभामुख रमा घर्तीमगरले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेकी हुन् ।
प्रदेश २ मा एमाले सांसदले आज सनाखत गर्दै छन् । कम्तीमा १३ जनाले नयाँ पार्टी रोज्नसक्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका सांसदले पनि केही दिनमै सनाखत गर्ने भएका छन् । अहिलेसम्म गण्डकीका सांसद खुलेका छैनन् । (हिमाल खबरबाट)